Otu esi eme Memoji na iPhone | esi m na mac
Otu esi eme Memoji na iPhone
Jordi Gimenez | | iPhone, Nkuzi
Otu n'ime nhọrọ ndị anyị nwere dị na iOS na ndị ọzọ kpọmkwem na iPhone bụ ime ma ọ bụ mepụta Memoji nke anyị. Memoji Apple rutere afọ ole na ole gara aga, kpọmkwem na ụdị 2018 nke iOS. Apple gbakwunyere atụmatụ akpọrọ Animoji otu afọ gara aga na ọ na-eji sistemụ igwefoto n'ihu ngwaọrụ ahụ maapụ mkpụrụedemede emoji na-ewu ewu na ihu anyị yana na ndị a ga-eme nṅomi nke mmegharị ahụ.
Nke a mere ka o kwe omume iṅomi ọdịdị ihu na ndekọ ozugbo na inwe ike izipu ya site na ozi ederede ma ọ bụ ọbụna kesaa ya na ngwa ndị ọzọ. Ọbịbịa Memoji gbanwere ụdị ozi a ntakịrị karịa ebe e kwere ka o mepụta otu n'ime anyị nwere àgwà anyị ma ọ bụ àgwà ndị yiri ya ịkọrọ na ozi. A ụdị animated katuunu kere onwe anyị na iPhone nwere ike na-ekere òkè na video oku na-aga, ozi ederede na ọbụna na ngwa dị ka WhatsApp, ee, nke ikpeazụ na-enweghị ndụ ije.
Ihe kacha mma na nke a bụ na anyị nwere ike mepụta Memoji dabara n'ụdị anyị na ọnọdụ anyị izipu ya site na ozi ma ọ bụ FaceTime. Enwere ike ịmepụta ihe ndị a ozugbo na iPhone ma ọ bụ iPad Pro dakọtara, ị nwere ike mee ka Memoji anyị dị egwu jiri olu anyị mepụtaghachi ọdịdị ihu anyị na ozi ederede.
1 Otu esi eme Memoji na iPhone
1.1 Otu esi emepụta ihe mmado Memoji
2 Zipu akwụkwọ mmado Memoji na WhatsApp
3 Otu esi eji Memojis animated na ozi ma ọ bụ FaceTime
Eji m n'aka na ezigbo Santa Claus wetara ọtụtụ n'ime unu iPhone ọhụrụ nke anyị nwere ike itinye na Memoji na ihe ndị ọzọ. N'okwu a, anyị ga-ahụ otu anyị nwere ike isi mee Memoji nke anyị na iPhone, mana Enwere ike itinye nke a nke ọma na iPad.
Iji malite anyị ga-ekwu na a ga-emepụta Memoji ndị a ozugbo site na ngwa ozi, yabụ ee ma ọ bụ ee anyị chọrọ iPhone ma ọ bụ iPad dakọtara. Ozugbo anyị nwere ya n'aka pịa nhọrọ iji dee ma ọ bụ mepụta ozi. Anyị nwekwara ike iji mkparịta ụka anyị meghere na ngwa ozi.
Pịa akara App Store nke na-egosi n'akụkụ aka ekpe aka nri n'akụkụ igwefoto
Mgbe ahụ, na bọtịnụ Memoji, ihu na-apụta nwere square edo edo wee banye n'aka nri wee pịa bọtịnụ Memojis ọhụrụ nwere akara +
Site ugbu a anyị amalitela ịhazi Memoji ma anyị nwere ọtụtụ puku nhọrọ dị
Akụkụ bụ isi nke Memoji anyị na-aga site na ịtọ ụda akpụkpọ ahụ, edozi isi, anya na ọtụtụ ihe ndị ọzọ
Iji mee nke a, anyị nwere ike iji amamihe anyị niile na-eji ngwa ndị sitere na ngwa Apple n'onwe ya. Memoji nke mbụ pụtara bụ n'ụda edo edo nke nwere ihu nkwọcha kpam kpam, yana okwu na-abụghị eziokwu. N'echiche a, naanị ihe dị mma bụ na ọ bụrụ na anyị na-ele anya na iPhone na-eme ka ihu ihu (rapaara ire, nso otu anya, wdg) anyị na-ahụ otú nwa bebi na-aza ọbụna mgbe anyị na-ekwu okwu, ọ na-akpali egbugbere ọnụ ya.
Anyị ga-amalite na ụda akpụkpọ anụ, mgbe ahụ, anyị ga-aga n'ihu na edozi isi anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti ịgbakwunye m ma ọ bụ na ọ bụghị, mgbe ahụ, anyị ga-aga nku anya nke agba agba nwere ike gbanwee anya na-esote anya, ọdịdị nke isi. , imi, ọnụ, ntị, ntutu ihu, ugogbe anya, uwe isi dị ka okpu, okpu na ọbụna uwe ndị Memoji anyị yi. Ebe a ka anyị ga-ewepụta echiche anyị na anyị nwere ike ịmepụta site na agwa yiri anyị gaa na agwa nke ejirila naanị ozi anyị na-eziga.
Otu esi emepụta ihe mmado Memoji
Na mgbakwunye na Memojis a ga-eji ozugbo na ozi ederede anyị nwere ike ịmepụta akwụkwọ mmado nke Memoji anyị. Nke a na-eme ka ha bụrụ ngwugwu akwụkwọ mmado na-echekwara na ahụigodo ma enwere ike iji ya ziga ozugbo na ngwa Ozi, Mail na ụfọdụ ngwa ndị ọzọ dị ka WhatsApp.
O doro anya na tupu ịmepụta ihe mmado anyị, anyị ga-emepụta Memoji, Anyị nwere ike mepụta Memoji ozugbo maka akwụkwọ mmado, nke a dabere na onye ọrụ ọ bụla yana ihe ha chọrọ imepụta. Ugbu a, ka anyị hụ otu esi emepụta ihe mmado site na Memoji:
Ihe mbụ bụ ịnweta Memoji anyị wee mepee ahụigodo na ngwa ozi wee pịa Memoji Stickers (ọtụtụ onyonyo Memoji pụtara ọnụ)
Anyị na-ahọrọ ihe mmado anyị chọrọ iziga wee pịa ya na akụ izipu
Enwere ike dezie Memoji ndị a n'oge ọ bụla dị mfe site na ngwa ozi site na ịpị Memoji dị ka ihe mmado anyị ga-eji isi ihe atọ pụtara n'akụkụ aka ekpe. iji dezie Memoji. Nhọrọ ndị a na-enye bụ Memoji ọhụrụ, dezie, oyiri ma hichapụ otu ihe ahụ. Ozugbo emechara ihe ahụ, anyị pịa OK ma ọ bụ ya.
Zipu akwụkwọ mmado Memoji na WhatsApp
Ugbu a anyị mepụtara Memoji n'ụdị ihe mmado, anyị nwere ike ịga ozugbo na ngwa WhatsApp wee kesaa ya onye ọ bụla anyị chọrọ. A na-eme nhọrọ a n'ụzọ dị mfe ma ọ bụ naanị achọrọ ya emebebu ihe mmado.
Iji zipu Memoji anyị, anyị ga-pịa akara ngosi Emoji nke na-egosi na ala nke ahụigodo iPhone, pịgharịa gaa n'aka nri wee pịa isi ihe atọ pụtara. N'ebe a, anyị nwere ike ịhọrọ n'etiti akwụkwọ mmado dị iche iche emebere na mbụ, maka nke a anyị na-ebuli elu site n'iji mkpịsị aka na-agbapụ na akwụkwọ mmado niile anyị debere pụtara.
Na mbụ na ụdị iOS ochie anyị kwesịrị ịse nseta ihuenyo na ọ na-esiri ike karị mana Ugbu a ọ dị mfe yana ngwa ngwa izipu ihe mmado nke Memoji anyị ozugbo site na iPhone na WhatsApp, Telegram ngwa na ndị ọzọ.
Otu esi eji Memojis animated na ozi ma ọ bụ FaceTime
N'aka nke ọzọ, anyị nwekwara nhọrọ nke izipu animated Memojis na ozi ma ọ bụ FaceTime ngwa. Ihe nke a na-eme bụ iziga ụdị vidiyo nwere Memoji nkeonwe ma ọ bụ Apple Memoji, unicorn, puppies, wdg. Naanị ihe anyị ga-eme bụ ịnwe ngwaọrụ dakọtara na ndị a sitere na iPhone X ruo ụdị iPhone 13 dị ugbu a yana site na 11-inch iPad Pro gaa na iPad Pro dị ugbu a.
Anyị na-emeghe ngwa ozi wee pịa mepụta ozi ọhụrụ ma ọ bụ ozugbo mkparịta ụka dị adị, mgbe ahụ anyị ga-emerịrị metụ bọtịnụ Memoji na ihu na square odo ma anyị slide ịhọrọ Memoji.
Ozugbo ahọpụtara anyị na-emetụ bọtịnụ ndekọ na-egosi na ntụpọ uhie na square uhie ka ịkwụsị ndekọ. Ị nwere ike ịdekọ ihe ruru sekọnd 30 nke vidiyo iji kesaa. Ka iji Memoji ọzọ nwere otu ndekọ, kpatụ Memoji ọzọ ị mebere. Iji mepụta ihe mmado Memoji, pịa ma jide Memoji ahụ wee dọrọ ya na eri ozi. Ka ihichapụ Memoji, pịa bọtịnụ ahịhịa na nke ahụ bụ ya
Ugbu a, anyị nwere ike iji olu anyị ziga Memoji animated a na-eme ụdị mmegharị ihu niile. Njirimara a na-arụ ọrụ naanị na ozi ma ọ bụ FaceTime.
Ime otu ihe ahụ na oku FaceTime ihe anyị ga-eme bụ mepee oku FaceTime na-abata ozugbo, pịa bọtịnụ mmetụta egosiri na ụdị kpakpando wee họrọ Memoji nke anyị chọrọ iji. Anyị nwere ike pịa bọtịnụ Mechie ka ịga n'ihu na-enweghị Memoji ma ọ bụ laghachi na FaceTime menu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » iPhone » Otu esi eme Memoji na iPhone
Enweelarị ụlọ ahịa Apple 25 mechiri na US n'ihi COVID